Fatịlaịza draya & oyi Series Factory | China Fatịlaịza draya & oyi Series Manufacturers, Suppliers
Mmanụ gas Igwe ikuku na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ mgbe nile na draya igwe na fatịlaịza mmepụta akara.
Highlọ ọrụ okpomọkụ dị elu arụ ọrụ Fan Fan a na-ejikarị ya eme ihe maka ịmepụta ọkụ na nrụgide nrụgide dị elu. A pụkwara iji ya nyefee ikuku dị ọkụ na gas ndị na-anaghị emebi emebi, ndị na-enweghị mgbagha, ndị na-adịghị agbawa agbawa, ndị na-adịghị agbanwe agbanwe, na ndị na-abụghị nke nnyapade. Ntinye ikuku na-abanye n'ime akụkụ nke nkucha ahụ, akụkụ ya na akụkụ axial na-agbagọ, ka gas wee banye na impeller were were, na ikuku ọnwụ dị obere. Igwe a na-eme ka a na-eme ya na ọkpọkọ njikọ jikọtara ya na draya fatịlaịza granular.
Pulverized Coal burner bụ ụdị ọhụrụ nke ọkụ ọkụ akụrụngwa, yana uru nke ọnụọgụ ọkụ ọkụ dị elu, nchekwa nchekwa na nchekwa gburugburu ebe obibi. Okwesiri maka igwe oku oku.